प्रचण्ड-माधव समूहलाई जसपाले भन्यो : ‘तपाईंहरूको पार्टी कुन हो ?’ « Khabar24Nepal
फागुन १४, काठमाडौं । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध साझा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा सहकार्यको प्रस्ताव अन्य शक्तिसँग अघि सारेको छ। उक्त समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले यही प्रस्ताव लिएर बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। तर, नेकपाको विवाद पहिले टुंगिनुपर्नेमा जसपा देखिएको छ।
जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले दाहाल–नेपाल पक्षको पार्टी कुन हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा कुरा उठाएको जानकारी दिए। ‘उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो’, नेता महतोले भने, ‘तपाईंको कुन पार्टी हो ? पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो। त्यो के हो ? त्यो प्रस्ट पार्नुस् पहिले भनेर हामीले जिज्ञासा राख्यौं।’
दाहाल–नेपालसँग छलफल गर्न जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ कोटेश्वर पेरिसडाँडा पुगेका थिए। श्रेष्ठले बुधबार पनि दाहाल र नेपालसँग छलफल गरेका थिए। झन्डै डेढ घण्टा छलफल चलेको थियो।
पुस ५ मा आफू पक्षका सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पनि अहिले कांग्रेस, जसपा र आफूहरूबीच सहमति भए अर्को प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा दाहाल–नेपाल देखिएका छन्। ‘त्यस बेला त्यस्तै परिस्थिति थियो। त्यही परिस्थितिसँग जुध्न एक खाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम भयो’, दाहाल–नेपालले भने, ‘अहिले परिस्थिति अर्को छ, कांग्रेस, तपार्इंहरू ९जसपा० र हामी मिलेर साझा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरौं। सत्ता समीकरण निर्माण गरौं। मिलेरै अगाडि बढौं।’
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाइ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्रीको नामसमेत उल्लेख गरेर प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। दाहाल–नेपाल पक्षले पुस ५ मा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा दाहालको नाम समावेश गरेको थियो। तर, त्यो नाममा पनि लचिलो हुने गरी छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको छ। ‘कांग्रेस, तपाईंहरू ९जसपा० र हामी पहिले बसौं। प्रधानमन्त्रीका लागि जसको नाममा सहमति बन्छ, उसैको नाम समावेश गरौं र साझा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर जाऔं,’ दाहाल–नेपालले प्रस्ताव राखे।
जसपाका नेताहरूले तर यो छलफललाई प्रारम्भिक भन्दै मोडालिटीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। ‘सहकार्यको प्रस्ताव आएको छ, यसको मोडालिटी प्रस्ट हुनुपर्छ। संविधान संशोधनका विषयमा हाम्रा मुद्दाहरू छन्। संविधानमा धेरै खाले त्रुटि छन्। रेशम चौधरी, आन्दोलनका क्रममा उहाँमाथि झुटा आरोप लगाएको छ। शपथ गराउने अनि संसद्मा हाजिर हुन नदिने काम भएको छ’, नेता श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘सहकार्य गर्न खुला हृदय हुनुपर्‍यो। समीकरण प्राकृतिक हुनुपर्छ। असैद्धान्तिक र अप्राकृतिक गठबन्धन गर्‍यो भने आज फेरि सत्ताका लागि गठबन्धन हुन्छ। फेरि त्यो टुट्छ। त्यसैले हाम्रो जोड कुनै पनि गठबन्धन गर्दा प्राकृतिक हुनुपर्छ भन्ने छ। प्रारम्भिक वार्ता भएको हो। कार्यकारिणी समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ।’
श्रेष्ठले दाहाल–नेपालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संयुक्त रूपमा अविश्वास प्रस्ताव राखौं भन्ने प्रस्ताव गरेको खुलाए। दाहाल–नेपालको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव राखौं। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरौं। सरकारमा पनि मिलेरै जाऔं। दुई वर्षभित्र देशका सबै समस्या हल गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो।’
अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेलगत्तै दाहाल र नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गर्दै मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। दुवै जनाले बुधबार बूढानीलकण्ठ पुगेर देउवासँग सहकार्यको प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए। तर, कांग्रेस र जसपा नेकपा विवादको अन्तिम टुंगो कसरी लाग्छ भन्नेमा पर्ख र हेरको नीतिमा जान खोजेको देखिन्छ। कानुनी रूपमा विभाजन भइनसक्दा कतै आगामी दिनमा नेकपा एकै हुन्छ कि भनेर आशंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा रहेको छ ।
श्रीमानलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ
प्यूठान नगरपालिका २ मा नेकपाका मुक्ती पोख्रेल विजयी